अंश र वंशमा समान अधिकार आवश्यक ः मन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, २४ फागुन । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अंश र वंशमा पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्त नभएसम्म महिला माथिको विभेद अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ ।
आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसरी निश्चित बिदामा केन्द्रित भएर गरिएको प्रदर्शनीले महिलाको अभिलेख र इतिहासबारे जानकारी दिनका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ ।” संकृति सङ्ग्रहालय नेपालका अध्यक्ष क्षितिज अरुण श्रेष्ठले समाजमा धेरै महिला छन् केही त्यस्ता महिलाको थप पहिचानको आवश्यक भएकाले आफूहरुले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । आजबाट शुरु भएको प्रदर्शनी आगामी ३० गतेसम्मका लागि रहनेछ । प्रदर्शनीमा नेपालका विभूति हरित तारा भृकुटी, भगवान् बुद्धको जननी माया देवीको फोटो रहेको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २४, २०७४१६:१२
अमेरिकामा एक नेपालीलाई लुटपाट गरि गोली हानी हत्या !
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा अझै थप चार पोष्ट स्थापना हुने !
भोलि नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँ, यस्तो छ उत्तम साइत!
एकै बेडमा ३ गर्भवती, भुइँमै उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता!